ကေမန်ကျွန်းစုခေါင်းဆောင်များသည်အစိုးရ ၀ န်ဆောင်မှုများတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးသတင်းများကိုပေးသည် ကေမန်ကျွန်းစုသတင်းများ
ပင်မစာမျက်နှာ » ရေးသားချက်များ » နိုင်ငံတကာ itor ည့်သည်သတင်း » ကေမန်ကျွန်းစုသတင်းများ » ကေမန်ကျွန်းစုခေါင်းဆောင်များသည်အစိုးရ ၀ န်ဆောင်မှုများတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးသတင်းများကိုပေးသည်
Breaking ခရီးသွားသတင်းများ • စီးပွားရေးခရီးသွားသတင်းများ • ကေမန်ကျွန်းစုသတင်းများ • အစိုးရရေးရာ • Industry ည့်ဝတ်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းသတင်းများ • နိုင်ငံတကာ itor ည့်သည်သတင်း • အခြား • သတင်းများပြုလုပ်ခြင်း • ခရီးသွားလုပ်ငန်းပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း • တာဝန်သိခရီးသွားသတင်း • ခရီးသွားသတင်း • ခရီးသွား Destination Update ကို • ခရီးသွားသတင်းများ • Travel ကြေးနန်းသတင်းများ • လူကြိုက်ရေစီးကြောင်းသတင်းများ
ကေမန်ကျွန်းစုခေါင်းဆောင်များသည်အစိုးရ ၀ န်ဆောင်မှုများတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးသတင်းများကိုပေးသည်
ဇြန္လ 24, 2020
ကေမန်ကျွန်းစု ခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့်ယခုအခါကေမန်ကျွန်းလူထုအတွက်အစိုးရ ၀ န်ဆောင်မှုများတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ကျွန်းသုံးကျွန်းတွင် ၂၄/၇ ကိုအခမဲ့ ၀ င်ရောက်နိုင်မည့် WiFi ဟော့စပေါ့ ၁၀ ခုအားထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
(၂၀၂၀၊ ဇွန် ၂၃ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့) သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် Rev. Audley U. Scott ကဆုတောင်းခြင်းဖြင့် Cayman ခေါင်းဆောင်များသည်အစိုးရ ၀ န်ဆောင်မှုများတိုးချဲ့ခြင်း၊ အထူးသဖြင့်ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးဌာန (HSA) နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ။ ထို့အပြင်နယ်လှည့်နယ်နိမိတ်များကိုပိတ်ထားစဉ်ကမန်ကျွန်းများနှင့်နိုင်ငံတကာသို့ခရီးသွားရာတွင်အထောက်အကူပြုမည့်“ ခရီးသွားချိန်” ကိုလည်းမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
ဒီနေ့ရလဒ်များမှာ ၄၅၁ ခုနှင့်မကောင်းသောလက္ခဏာများမဟုတ်ပါ။
ကေမန်ကျွန်းစုတွင်ပြုလုပ်သောစမ်းသပ်မှုအရေအတွက်မှာ ၂၁,၂၈၂ ဖြစ်သည်။
ယခုအချိန်ထိစုစုပေါင်းလက္ခဏာ ၁၉၅ ခုတွင်လက္ခဏာပြခြင်းမရှိ၊ လက္ခဏာပြသူ ၄၀ မရှိ၊ ဆေးရုံတက်ရသူမရှိ၊ ၁၅၄ ဦး မပျောက်ပါ။
လက်ရှိတွင်အစိုးရ၏အထီးကျန်နေရာတွင် ၁၄၀ ရှိပြီး ၁၆၆ ယောက်မှာအိမ်တွင်နေရသည်။
ယမန်နေ့ကလူ ၆ ယောက်သည်တုပ်ကွေးဆေးခန်းတွင်ပျော့ပျောင်းသောရောဂါလက္ခဏာများဖြင့်တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီး ၂၄ ယောက်အနက် ၇ ခုမှာတုပ်ကွေးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
ကျနော်တို့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နေစဉ်သူကအကောင်းမြင်အရေအတွက်တိုးလာမယ့်လမ်းကြောင်းသစ်ကိုမျှော်လင့်မထားဘူး။ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသိုင်းအဝိုင်းသည်ယခုတွေ့ရှိခဲ့သည့်အပြုသဘောဆောင်သည့်ရောဂါများတွင်ယခင်ကူးစက်မှု၏အမြီးကိုမြင်နေသည်။ ကူးစက်မှုအသစ်မရှိပါ။
immunoglobulin စမ်းသပ်မှုအသစ်များသည်ယခုအချိန်အထိ Cayman ကျွန်းများရှိလူသိများသောရောဂါလက္ခဏာများတွင်ပantibိပစ္စည်းများ၏အပြုသဘောဆောင်သောအခြေအနေကိုပြသလျက်ရှိသည်။
စမ်းသပ်မှုရလဒ်များသည်“ မယုံနိုင်လောက်အောင်ကောင်းမွန်စွာ” ဆက်လက်တည်ရှိနေပြီး၊ ယခုအချိန်အထိအစိုးရ၏နည်းဗျူဟာများမှာကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နေကြောင်းအလေးအနက်ဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိအကောင်းမြင်မှုနှင့်အားပေးမှုများစွာရရှိစေသည်။
အဆင့် ၂ ဖိနှိပ်မှုအဆင့် (၁) ဆိုသည်မှာလူအများအပြားသည်အလုပ်ပြန်ဆင်းလာကြပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လူမှုရေးဝေးကွာခြင်း၊ မျက်နှာဖုံးများ ၀ တ်ခြင်း၊ လက်များကိုမကြာခဏဆေးကြောခြင်းနှင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာသန့်ရှင်းမှုအပါအ ၀ င်သတ်မှတ်ထားသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုတင်းကြပ်စွာလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။
“ Stay Home Cayman” မှ“ Safe Cayman” သို့ပြောင်းသွားခဲ့သည်။
ပရီးမီးယားလိဂ်အပြည့်အဝမှတ်ချက်တွေအဘို့, အောက်က sidebar ကိုကြည့်ပါ။
ကေးမန်ကျွန်းစု၏ရလဒ်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ရက်အတွင်းအဆိုး ၁၀၀၀ နီးပါးနှင့်အပြုသဘောဆောင်သောလက္ခဏာများဖြင့်အားတက်နေဆဲဖြစ်သည်။
အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံမှအသေးစိတ်အတွက် အောက်က sidebar ကိုကြည့်ပါ.
ကျန်းမာရေး ၀ န်ဆောင်မှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့မှရွေးချယ်ထားသောခွဲစိတ်မှုနှင့်ပြင်ပလူနာစောင့်ရှောက်မှုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန်အတွက်အဆင့်အစီအစဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၃ လအတွင်း HSA သို့အခမဲ့လက်သန့်ရှင်းရေးဆေးဝါးများဆက်လက်ပေးအပ်နေသည့်အတွက် Cayman Distillery ရှိ Nelson Dilbert နှင့် Walker Romanica သို့ထွက်ပြေးခဲ့ကြသည်။
sidebar ကိုကြည့်ပါ အောက်တွင် ဝန်ကြီးကနေပိုပြီးသည်။
ကုန်သွယ်ရေး၊ စီမံကိန်းနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံဝန်ကြီး Hon ။ ဂျိုဝိုင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်
ဒေသခံ Wi-Fi ဟော့စပေါ့ဆယ် (၁၀) ခုသည်ယခုအခါ Grand Cayman, Cayman Brac နှင့် Little Cayman တစ်လျှောက်တွင်နေထိုင်သူများပျော်မွေ့ရန်နှင့်အခမဲ့ကြိုးမဲ့အင်တာနက်ကိုအများသုံးရရှိနိုင်ရန်ရရှိနိုင်သည်။
ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဌာနသည်၎င်းတို့၏အွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းနှင့်ဝေးလံခေါင်ဖျားသောအလုပ်များမှတစ်ဆင့်ထူးကဲသော ၀ န်ဆောင်မှုကိုဆက်လက်ပေးခဲ့သည်။
မော်တော်ယာဉ်နှင့်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်ဌာန (DVDL) ၀ န်ထမ်းများသည်လွန်ခဲ့သောသုံးလအတွင်းစုစုပေါင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည် 10,181 မော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်သက်တမ်းတိုး။
၀ န်ကြီး Hew ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ၊ အောက်က sidebar ကိုကြည့်ပါ.
Sidebar: ခရီးသွားခြင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်လမ်းညွှန်ချက် Premier မှအထူးဖော်ပြသည်
၂၀၂၀၊ ဇွန် ၂၁ ရက်တနင်္ဂနွေနေ့တွင်သင်သိသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်အဆင့် ၂ ဖိနှိပ်မှုအဆင့် ၁ သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ၀ န်ထမ်းများ၊ စောင့်ရှောက်သူများ၊ ဆံပင်နှင့်အလှပြင်ဆိုင်များပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများ၊ ရုပ်ရှင်ရုံများနှင့်ပြဇာတ်ရုံများအပါအ ၀ င်လူအများထပ်မံအလုပ်များသို့ပြန်ရောက်လာခြင်းကိုလည်းဆိုလိုသည်။
ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်ရရှိသောအစီရင်ခံစာများသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအပြည့်အဝလည်ပတ်လာသည်နှင့်အမျှအားတက်ဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက်သွားတာနဲ့အမျှအားလုံးကိုနိုးနိုးကြားကြားရှိနေဖို့နဲ့လူမှုရေးအရတာဝန်ယူမှုတွေကိုလျှော့ချပေးဖို့နိုးနိုးကြားကြားရှိနေဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်ဤမျှလောက်ကြီးစွာသောအလုပ်အကိုင်အကြီးအယဇျပူဇျောခဲ့ပါပွီ။ ဗိုင်းရပ်စ်သည်ပျောက်ကွယ်သွားခြင်းမရှိသေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ထဲတွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုရေးအကွာအဝေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်၊ အများမြင်သာသောနေရာများတွင်မျက်နှာဖုံးသို့မဟုတ်မျက်နှာဖုံးကို ၀ တ်ဆင်ပြီးအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ protocol များကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏အစိုးရဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်မျှဝေသည်။ line comingaof the line line line line line line line guidance The The လမ်းညွှန်များကိုတီထွင်ထားပြီးလိုင်းပေါ်ရှိcomingရိယာအတော်များများအားဘေးကင်းစွာပြန်လည်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်ကူညီခဲ့သည်။
အစောပိုင်းကလေးစောင့်ရှောက်ရေးစင်တာများ၊ နွေရာသီစခန်းများ၊ အပန်းဖြေကျမ်းစာကျောင်းများ (ဇူလိုင်လ ၅ ရက်တွင်ပြန်လည်) ၏လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်လမ်းညွှန်ချက်၊ နှင့်
ဇူလိုင်လ 19 ရက်နေ့တွင်အားကစားပြန်လည်စတင်များအတွက်မူဘောင်။
ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန်အတွက်လမ်းညွှန်ချက်များသည်ကေမန် ၀ န်ကြီးများအသင်းနှင့်သတ္တမနေ့စွန့်စားသူများချာ့ချ်၏ကွန်ဖရင့်နှစ်ရပ်လုံးမှထောက်ခံမှုရရှိခဲ့ပြီးအစိုးရဝက်ဘ်ဆိုက်၌တွေ့နိုင်သည်။
သံသယကိုဖယ်ရှားရန်ဘုရားကျောင်းသို့တက်ရောက်သူများသည်အိမ်တွင်းမျက်နှာဖုံးများ ၀ တ်ရန်လိုအပ်သည်ကိုသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆက်လက်၍ ပွင့်လင်းလာသည်နှင့်ပြည်ပမှပြည်သူများပိုမိုစိတ်ပျက်လာသည်နှင့်အမျှအိမ်ပြန်ချိန်အသစ်အဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ရန်ညမထွက်ရအမိန့်ဟုခေါ်သောအရာတွင်အလုပ်လုပ်ခဲ့သူတစ် ဦး ချင်းအားအသုံးချရန်ကျွန်ုပ်တို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
“ ညမထွက်ရအမိန့်အချိန်” သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ Covid-19 လျော့ပါးသက်သာစေရေးကိုအထောက်အကူပြုသောအောင်မြင်မှုအပေါ် အခြေခံ၍“ ခရီးသွားအချိန်” စစ်ဆင်ရေးကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ လေကြောင်းနှင့်ရေကြောင်းရေးရာ ၀ န်ကြီးဌာနမှအရာရှိချုပ်အဲရစ်ဘုရှ်နှင့်အတူဆောင်ရွက်မည် အသင်းအဖွဲ့။
Caymanians၊ အမြဲတမ်းနေထိုင်သူများနှင့်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူများကို Cayman ကျွန်းများသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိစေရန်အတွက်ခရီးသွားချိန်ကိုတာဝန်ပေးလိမ့်မည်။ ဤသို့ပြုရာတွင်သူတို့သည်ပြန်လည်နေရာချထားသူများအတွက်လိုအပ်သောအခန်းများနှင့်လိုအပ်သလိုသီးခြားခွဲထားရန်လိုအပ်သောနေရာများရှိစေရန်အစိုးရ၏အထီးကျန်အဆောက်အ ဦ များကိုလည်းစီမံခန့်ခွဲလိမ့်မည်။ ၄ င်းတို့သည်နေရင်းပြည်သို့ပြန်ရန်မျှော်လင့်သူများအားပြန်လည်နေရာချထားရေးကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
ခရီးသွားချိန်သည်ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့မှစ၍ ဤစစ်ဆင်ရေးကိုအပြည့်အဝတာဝန်ယူမည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ ကေးမန်ကျွန်းနှင့်ခရီးသွားခြင်းအတွက်ယနေ့အထိပြုလုပ်သောအစီအစဉ်များနှင့်ကြေငြာချက်များအားလုံးသည်တူညီနေ ဦး မည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်မတ်လ ၂၂ ရက်မှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏နယ်နိမိတ်ကိုပိတ်ပစ်လိုက်သောအခါအစိုးရသည်ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလာခွင့်ကန့်သတ်ချက်များကြောင့်အရေးပေါ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလေယာဉ် ၃၀ ကိုစီစဉ်ပေးခဲ့သည်။
ဤအရေးပေါ်အခြေအနေကို National Emergency Operations Center နှင့်အုပ်ချုပ်ရေးရုံး၊ Cayman Airways နှင့်ယူကေရှိကေမန်ကျွန်းအစိုးရရုံးတို့မှတဆင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ Cayman အခြေအနေတွင်အဆိုပါပျံသန်းမှုများကိုအစိုးရ ၀ န်ထမ်းများနှင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကအထင်ကရစင်တာများကိုဖန်တီးရန်နှင့်အစိုးရ၏ပြင်းထန်သောဤဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပျံ့နှံ့မှုကိုရပ်တန့်ရန်အတွက်ရန်လိုသောထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများအားကျယ်ပြန့်စွာချီးကျူးဂုဏ်ပြုသောအလုပ်ဖြင့်ထပ်မံထောက်ခံခဲ့သည်။
National Emergency Operations Centre (NEOC) ပျက်သုဉ်းသွားသောကြောင့်အရေးပေါ်ခရီးသွားလာခြင်းကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးသောအဖွဲ့များနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်များသည်၎င်းတို့၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှုများသို့ပြန်သွားနေကြသည်။
လာမည့်လအနည်းငယ်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကန့်သတ်ချက်များရှိနေသေးသော်လည်းသူ၏ ၀ န်ကြီးချုပ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်သူ၏ရုံးမှတဆင့်အစိုးရ ၀ န်ကြီးဌာနများ၊ ပြဌာန်းထားသောအာဏာပိုင်များနှင့်အခြားနိုင်ငံများအကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သည်။
ငါပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း, ကမန်ကျွန်းများသို့သွားရောက်ရန်လိုအပ်သူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အဆင်ပြေချောမွေ့သောအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖန်တီးရန်ဤကြိုးပမ်းမှုများကိုညှိနှိုင်းပေးမည့်အဖွဲ့အစည်းအသစ်တစ်ခုကိုငါဖန်တီးခွင့်ပြုခဲ့သည်။ “ ခရီးသွားအချိန်” ဟုခေါ်သည့်အဖွဲ့အစည်းအသစ်သည်ခရီးသွားလာရေးကိုစီမံခန့်ခွဲရန်နှင့်အများပြည်သူနှင့်ဆက်သွယ်မှုပြုလုပ်လိမ့်မည်။
လွန်ခဲ့သောသုံးလတာကာလအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ပေါင်းစပ်ကြိုးပမ်းမှုများမှတစ်ဆင့် Covid-19 အားကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်အတွင်းထိန်းချုပ်မှုကုန်ဆုံးသွားစေရန်ကျွန်ုပ်တို့စီမံနိုင်ခဲ့သည်။ ငါတို့မူကား၊ ခရီးသွားချိန်အသစ်သည်အစိုးရအား Covid-19 ကူးစက်ရောဂါကိုအောင်မြင်စွာစီမံနိုင်အောင်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းရင်းကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းခြေများနှင့်ခရီးသွားလာခြင်းကိုပိုမိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အစိုးရအားကူညီလိမ့်မည်။
ဘေးဘား: အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Cayman ရဲ့ကောင်းသောရာထူးမှတ်ချက်ပြုထားသည်
တစ်ကြိမ်ထပ်စမ်းသပ်မှုရလဒ်များကိုအားပေးခြင်း လွန်ခဲ့သော ၂ ရက်အတွင်းအဆိုး ၁၀၀၀ နီးပါးနှင့်လက္ခဏာမပြသ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နည်းဗျူဟာအလုပ်လုပ်နေသည်ကိုပြသသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်းများပေါ်တွင်အလွန်ကောင်းသောအနေအထားတွင်ရှိနေပြီးကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သောလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်သင်၏အလွန်ကောင်းမွန်သောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။
တကမ္ဘာလုံး WHO မှကူးစက်ရောဂါသည်အရှိန်မြှင့်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဇွန်လ ၂၁ ရက်နေ့တွင်အမှုအသစ် ၁၈၃,၀၀၀ - တစ်ရက်အတွင်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း၌ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ၉ သန်း။ နှင့်ဝမ်းနည်းစွာနီးပါး 183,000 သေဆုံးမှု။
အားနည်းသောဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲများထွက်ပေါ်လာကြောင်းသက်သေအထောက်အထားမရှိဟု WHO ကပြောကြားသည်။ ကူးစက်ရောဂါ၏ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုသို့မဟုတ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလျော့နည်းစေသည့်အရာမရှိသေးပါ။
ငါသတိမပြုဘဲနေရမည်ကိုငါပြော၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လူမှုရေးဝေးကွာခြင်း၊ အခြေခံသန့်ရှင်းရေးနှင့်ကောင်းမွန်သောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့်နှာချေခြင်း) နှင့်အများပြည်သူနေရာများတွင်မျက်နှာဖုံးများကိုဝတ်ခြင်းများကိုကျင့်သုံးရန်လိုအပ်သည်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်အားနည်းချက်အပါအ ၀ င်မိမိကိုယ်ကို၊ မိသားစုနှင့်အသိုင်းအဝိုင်းကိုအကောင်းဆုံးကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။
နယ်စပ်ကိုလုံခြုံအောင်ဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲဆိုတာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအပေးအယူလုပ်ဖို့လိုတယ်။ အဘယ်သူမျှမသုညအန္တရာယ်ဖြေရှင်းချက်မရှိပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကာကွယ်ဆေးမထိုးမချင်း“ ပုံမှန်အသစ်” အောက်တွင်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းထားရန်လိုအပ်သည်။
လုံခြုံရေးအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ (SAT) သည်နောက်အပတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုထွက်ခွာမည်။ သူတို့ဒီမှာရှိနေတာနှစ်လရှိပြီ။ သူတို့ပေးခဲ့တဲ့အကူအညီတွေအတွက်ငါအရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်။ သူတို့၏ RFA Argus ခရီးစဉ်အတွင်းဟာရီကိန်းစစ်ဆင်ရေးနှင့် RCIPS သို့ရဟတ်ယာဉ်အထောက်အပံ့များပါ ၀ င်သည်။ လေယာဉ်အမှုထမ်းများသည်မူးယစ်ဆေးတင်ပို့မှုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ကူညီပေးခဲ့ပြီးပြီးခဲ့သည့်အပတ်က Grand Cayman ကမ်းခြေရှိအခက်အခဲများကြုံတွေ့နေရသောလှေစီးပြေးသမား ၂ ဦး အားလည်းတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ ၎င်းအဖွဲ့တွင် HSA ဓာတ်ခွဲခန်းကိုပံ့ပိုးပေးခဲ့ပြီး BA Airbridge လေယာဉ်ခရီးစဉ်များကိုကူညီပံ့ပိုးပေးသည့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကျွမ်းကျင်သူများပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်အရေးအကြီးဆုံးအချက်မှာအသင်းသည်လူသစ်စုဆောင်းခြင်း၊ လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များနှင့်ကေးမန်ကျွန်းစုတပ်ရင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လိုအပ်သောဥပဒေပြုခြင်းများကိုထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ ပရီးမီးယားလိဂ်၏သဘောတူညီချက်ဖြင့်အသင်းကိုခေါ်ယူခြင်းသည်ပိတ်ဆို့ခြင်းပြီးနောက်ချက်ချင်းပင်ခက်ခဲသောအချိန်တွင်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော၊ စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်းအတာနှင့်ဗြိတိန်၏ကတိက ၀ တ်ဖြစ်သည်။ ငါသူတို့ပံ့ပိုးပေးအားလုံးထောက်ခံမှုများအတွက်အသင်းကိုကျေးဇူးတင်တယ်။
အစိုးရ ၀ န်ထမ်းများ၏ ၀ ယ်ယူသူများ၏အာရုံစိုက်မှုကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြသသည့်အနေဖြင့် ယနေ့မှစ၍ ဗြိတိန်နိုင်ငံရပ်ခြားနယ်မြေများဆိုင်ရာနိုင်ငံသားဖြစ်မှု (BOTC)၊ သဘာဝ / မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဗြိတိသျှမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ရာဇ ၀ တ်မှုမှတ်တမ်းများတိုးချဲ့ခြင်းဆိုင်ရာလျှောက်လွှာများကိုဒုတိယလက်သို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှတင်ပြခွင့်ပြုသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကိုအီးမေးလ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ သက်ဆိုင်ရာအခကြေးငွေများ (US သို့မဟုတ် CI ငွေ၊ ဒက်ဘစ်၊ ခရက်ဒစ်ကဒ်သို့မဟုတ်ဒေသစစ်ဆေးမှုများ) ကိုစာတိုက်ရုံးများတွင်ပေးနိုင်ပါသည်။ လျှောက်ထားသူသည်သက်ဆိုင်ရာလျှောက်လွှာပုံစံကိုကူးယူရန်၊ စာတိုက်ဌာန၊ သက်ဆိုင်ရာအခကြေးငွေပေးဆောင်ရန်၊ ပုံစံနှင့်အီးမေးလ်ကိုအောက်ပါအတိုင်းသက်ဆိုင်ရာဆက်သွယ်ရန်နေရာသို့အီးမေးလ်ပို့ရန်လိုအပ်သည် -
BOTC သဘာဝ / မှတ်ပုံတင်ခြင်း [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
ဗြိတိသျှမှတ်ပုံတင်ခြင်း / Naturalisaion: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] (Scans သည်ဗြိတိသျှမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အရောင်ဖြစ်ရမည်)
Sidebar - ၀ န်ကြီး Seymour မှ HSA ၀ န်ဆောင်မှုများကိုတိုးချဲ့သည်
ငါ၏အချင်းချင်း Caymanians နှင့်နေထိုင်သူများမှနေ့လည်ခင်း။
သင်သိသည့်အတိုင်း Grand Cayman သည်အဆင့် ၂ အနိမ့်ဆုံးဖိနှိပ်မှုသို့ COVID-2 တုံ့ပြန်မှုသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီးကျန်းမာရေး ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့ (HSA) သည်ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့်ခွဲစိတ်မှုနှင့်ပြင်ပလူနာစောင့်ရှောက်မှုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန်အတွက်၎င်း၏အဆင့်အစီအစဉ်ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ။
ဤအဆင့်တွင်အရေးပေါ်အခြေအနေမဟုတ်သောနှင့်အသေးစားစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်နေသူများသည်ယခုအခါကေမန်ကျွန်းဆေးရုံ၊ ခရိုင်ကျန်းမာရေးစင်တာများ၊ ကိုင်မန်ဘရိတ်ရှိယုံကြည်ခြင်းဆေးရုံနှင့်ကေးမန်ဆေးခန်းတို့အပါအဝင်ပြင်ပလူနာဆေးခန်းများသို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်းသူတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများစွာကိုပိတ်ပစ်လိုက်သောကြောင့်ဆေးကုသမှု၊ ခွဲစိတ်မှုနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုများအတွက်လူနာလိုအပ်ချက်ရှိကြောင်း HSA မှနားလည်သည်။ HSA ၀ န်ထမ်းများသည်ဤလိုအပ်ချက်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်ဂရုတစိုက်နှင့်သင့်လျော်စွာပြင်ဆင်ထားကြောင်းသင့်အားငါပြောနိုင်သည်။
လူနာများနှင့် ၀ န်ထမ်းများအားထူထောင်ထားသောလမ်းညွှန်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ COVID-19 မှအကာအကွယ်ပေးရန်တင်းကြပ်သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုအာရုံစိုက်ပြီး HSA အဆောက်အအုံများအားလုံးတွင် ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးကိုအချိန်ဖြန်ဖြည့်တင်းပါလိမ့်မည်။ ယခင်ချိန်းဆိုထားသည့်လူနာအားလုံးအားပြန်လည်စီစဉ်ရန်ဆက်သွယ်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ လူနာများသည်ချိန်းဆိုမှုများနှင့် ပတ်သတ်၍ မေးခွန်းများသို့မဟုတ်စိုးရိမ်မှုများရှိပါကသို့မဟုတ်ရက်ချိန်းယူရန်လိုအပ်ပါက 949-8600 သို့ခေါ်ဆိုပါ။ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးသည်လာမည့်ရက်သတ္တပတ်များအတွင်းလူနာများအားလွဲချော်သောကာကွယ်ဆေးများထိုးရန်အခွင့်အလမ်းပေးသည့်ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်ပါလိမ့်မည်။ အကာအကွယ်ပေးသည့်အစီအမံများစာရင်းပါဝင်သည်။
လိုင်းများနှင့်ပိတ်ဆို့မှုကို minimize လုပ်ရန်လူနာအားလုံးကိုသူတို့မချိန်းခင်ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်း၊
ဆေးခန်းများသို့မဟုတ်ဌာနများသို့မဝင်ရောက်မီလူနာအားလုံးကိုအပူချိန်နှင့် COVID-19 လက္ခဏာများအတွက်စစ်ဆေးခြင်း။
လူမှုရေးအကွာအဝေးအနည်းဆုံး ၆ ပေကိုထိန်းသိမ်းရန်ဆေးခန်းအားလုံးတွင်စောင့်ဆိုင်းခန်းထိုင်ခုံအပြောင်းအလဲများ၊
COVID-19 စစ်ဆေးခြင်းကိုလူနာများအားရွေးချယ်ခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည့် C-section များအပါအ ၀ င်) အတွက်လိုအပ်သည်။ ၄ င်းတို့၏လုပ်ထုံးလုပ်နည်းမတိုင်မီ ၃ ရက်အလိုတွင်သတ်မှတ်ထားသောစစ်ဆေးမည့်toရိယာသို့ရောက်လိမ့်မည်။
၀ န်ထမ်းအားလုံးအတွက် PPE နှင့်နေ့စဉ် ၀ န်ထမ်းများအားနေ့စဉ်ကြည့်ရှုခြင်းအပြင်လူမှုရေးဝေးကွာမှုကိုသေချာစေရန်သေချာစွာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအပါအ ၀ င်နောက်ထပ်အဆင့်များရှိသည်။ အခြားအစီအမံများစာရင်းအပြည့်အစုံအတွက် HSA ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုရန်တိုက်တွန်းလိုပါသည်။
မင်းတို့ထဲကအများစုဟာချစ်ရသူတွေဆီကိုသင်စတင်လည်ပတ်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုလည်းမျှော်လင့်နိုင်တယ်လို့ကျွန်မတို့သိပါတယ်။ HSA ကလက်ရှိ visit ည့်သည်များရဲ့ကန့်သတ်ချက်များကိုတဖြည်းဖြည်းဖြေလျှော့ပေးဖို့လိုအပ်ပေမယ့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးရဲ့လမ်းညွှန်မှုအောက်မှာသာကာကွယ်တားဆီးဖို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးရဲ့လမ်းညွှန်မှုအောက်မှာ ဤရောဂါပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်လူနာများ၊ ၀ န်ထမ်းများနှင့် visitors ည့်သည်များအားကာကွယ်ခြင်း။
public ည့်သည်မူဝါဒသည်သူတို့လိုက်နာရမည့်လိုက်နာရမည့်စည်းမျဉ်းများရှိသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၌မေးခွန်းအချို့ရှိနေသေးသော်လည်းသင်နှင့်အတူသင်ယခုသွားလည်ရန်ကျွန်ုပ် ၀ မ်းသာပါသည်။
ည့်သည်များသည်အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးမျက်နှာမျက်နှာဖုံးတပ်ရမည်။
visitors ည့်သည်များအားလုံးကို Cayman Islands ဆေးရုံမ ၀ င်မီစစ်ဆေးပါမည်။
visitors ည့်သည်အားလုံးအားလူနာ၏အခန်းနှင့်ဆေးရုံနှစ်ခုလုံးသို့ ၀ င်ရောက်ပြီးလက်ကိုဆေးကြောရန်တောင်းဆိုသည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ၊ ခွဲစိတ်မှုနှင့်အရေးပေါ်စောင့်ရှောက်မှုယူနစ်များအတွက်နံနက် ၁၁ နာရီမှည ၈ နာရီထိလည်ပတ်သည်။
အကူအညီလိုအပ်နေသည့်လူနာများအနေဖြင့် ၄ င်းတို့၏စောင့်ရှောက်ရေးအသင်းတွင်စောင့်ရှောက်သူတစ် ဦး ရှိနိုင်သည်။
amb ည့်သည်တစ် ဦး သည်လူနာနှင့်အတူလူနာနှင့်အတူလူနာနှင့်အတူလူနာနှင့်အတူလူနာလူနာ၏ဆေးရုံသို့အလည်အပတ်သွားရောက်ခြင်း၊
တစ်နေ့လျှင် visit ည့်သည်တစ် ဦး ကို Maternity Ward တွင်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ကလေးအထူးကုယူနစ်ရှိလူနာများအတွက်လူနှစ် ဦး (မိဘ၊ အုပ်ထိန်းသူသို့မဟုတ်စောင့်ရှောက်သူ)
မွေးကင်းစကလေးအထူးကြပ်မတ်စောင့်ရှောက်မှုယူနစ် (NICU) သည်မိဘတစ် ဦး ကိုနေ့စဉ်ခွင့်ပြုသည်။
COVID-19 အပြုသဘောလူနာများလိမ့်မည် မ visitors ည့်သည်များခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
မှတ်မိဖို့အများကြီးလိုတာကိုငါတို့သိတယ်။ ဒါကြောင့် HSA အဖွဲ့ကအပြောင်းအလဲများကိုလုံခြုံစွာသွားလာရန်ကျွန်ုပ်တို့အားအထောက်အကူပြုမည့်ဆိုင်းဘုတ်များအပါအ ၀ င်ပြန်ဖွင့်တဲ့အရာများစွာကိုလုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းစိတ်ချပါ။
သင်၏ကျန်းမာရေး ၀ န်ကြီးအနေဖြင့်သင်သည် ထပ်မံ၍ ဆေးရုံသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိနိုင်ကြောင်းသင့်အားအသိပေးရသည့်အတွက်အလွန်ဝမ်းသာပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆေးရုံများသည်ကူးစက်ရောဂါများကိုပုံမှန်စီမံပြီးဤအချိန်ကာလအတွင်းလူနာများ၏လုံခြုံမှုကိုသေချာစေရန်ထပ်မံလုပ်ဆောင်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
လူနာများနှင့် visitors ည့်သည်များအားကမ္ဘာအနှံ့ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေဆဲဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အိမ်သို့ဆက်လက်မောင်းနှင်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားကာကွယ်ရန်လိုအပ်သောကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ရမည့်သတင်းကို HSA ရှိကျွန်ုပ်အဖွဲ့၏သဘောထားကိုသံယောင်လိုက်ခြင်းသည်ခွင့်လွှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုကို
လွန်ခဲ့သော ၃ လအတွင်း HSA သို့အခမဲ့လက်သန့်ရှင်းရေးအတွက်ဆက်လက်ထောက်ပံ့နေမှုအတွက် Cayman Distillery ရှိ Nelson Dilbert နှင့် Walker Romanica တို့အားယနေ့ကျွန်ုပ်ကြွေးကြော်လိုသည်။ သူတို့သည်သန့်စင်ဆေးရည်လီတာ ၅၀၀၀ ကျော်လှူဒါန်းခဲ့သည်။ အဆိုပါအလှူငွေများသည် Grand Cayman ရှိကျွန်းတစ်ကျွန်းလုံးရှိအာဏာပိုင်များနှင့်အာဏာပိုင်များနှင့် Cayman Brac သို့သွားသောဂါလံ ၅၅ ခုသို့သွားသည်။
HSA၊ RCIPS၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဌာန၊ CBC၊ ဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်၊ HMCI၊ သီးခြားတည်းခိုခန်းများ၊ မြောက်ဘက်အကျဉ်းထောင်၊ တရားရေးဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေး၊ ဆရာဝန်များရုံးနှင့်ပုဂ္ဂလိကဆေးခန်းအမျိုးမျိုး၊ ဘီးများပေါ်တွင်အစားအစာများ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ ကင်ဆာလူ့အဖွဲ့အစည်း၊ နှင့်အခြားသူများကို; မရေမတွက်နိုင်သောဆေးများ၊ အရာရှိများ၊ ရှေ့တန်းလုပ်သားများနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီ၊ ၎င်းတို့၏လတ်တလောအစည်းအဝေးများအတွက် protocol ရုံးနှင့်ဥပဒေပြုညီလာခံ။
Covid-19 ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲတွင်ဤမျှကြီးမားသောအခန်းကဏ္ playing မှပါဝင်ခဲ့သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ထို့အပြင်သင်တို့အများစုသည်ကာရစ်ဘီယံဒေသတစ်လျှောက်ပြန့်နှံ့နေသောဆာဟာရဖုန်မှုန့်များနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်ကြသည်ကိုငါသိ၏။ National Weather Service မှထုတ်ပြန်သောကြေညာချက်ကိုပြည်သူလူထုအားခဏတာမျှသတိရစေလိုသည်မှာလာမည့် ၂၄ နာရီအတွင်း Cayman ကျွန်းများတွင်မြုပ်နှံနေသောအခြေအနေများကိုမျှော်လင့်နိုင်သည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး ဦး စီးဌာနအနေဖြင့်ဖုန်မှုန့်များနှင့်အမှုန်များပါဝင်မှုမြင့်မားသောကြောင့်ဤအခြေအနေများသည်ပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါရှိသူများနှင့်အခြားအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများအတွက်ရောဂါလက္ခဏာများကိုတိုးပွားစေနိုင်သည်ဟုလူထုကိုအကြံပေးသည်။ ထိုကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်များကိုဤအချိန်ကာလအတွင်းတတ်နိုင်သမျှအတွင်း၌နေရန်အကြံပြုသည်။
နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်းတစ်လွှား၌ခြင်အရေအတွက်များပြားလာသည်ဟုသတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။ MRCU သည်ဤအရာများကိုတိုက်ဖျက်ရန်အတွက်သတိထားပြီးကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေသည်။ ပြီးခဲ့သည့်ညကမြောက်ဘက်ခြမ်းနှင့် Prospect / Red Bay ဒေသများမှလေကြောင်းမှုတ်လိမ်းမှုများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး Frank Sound နှင့် North Side ဒေသများရှိယနေ့ညတွင် ထပ်မံ၍ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ Whitehall Estates၊ Snug Harbour, Smith Road, Walkers Road, North Sound Estates နှင့် Bodden Town ဒေသများရှိယနေ့ခေတ်တွင်မြေမှုန့်ပက်ဖြန်းမှုသည်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသည်။
COVID-19 ကူးစက်ရောဂါတစ်လျှောက်တွင် MRCU သည်ထုတ်လုပ်မှုနေရာများနှင့်ပေါ်ထွက်လာသော၊ ပျံသန်းခြင်းနှင့်ကိုက်နေသောခြင်များကိုလေ့လာခြင်းနှင့်ကုသခြင်းများပြုလုပ်နေကြောင်းအများပြည်သူအားအာမခံလိုပါသည်။ ၎င်းတို့သည် COVID-19 ဂီယာပြန့်ပွားမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်သင့်လျော်သောကြိုတင်ကာကွယ်မှုများအားလုံးကို ၀ န်ထမ်းများနှင့် ၀ န်ထမ်းများအားသေချာစွာလိုက်နာရန်သေချာစေပြီးအရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ၊ သူတို့က COVID-19 ကိုသူတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုသက်ရောက်မှုမရှိစေရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်း၎င်းသည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအချို့ကိုသြဇာသက်ရောက်နိုင်ခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်အတွင်းလေကြောင်းအစီအစဉ်သည်လေယာဉ်ကွင်းနှင့်လေဆိပ်လုပ်ငန်းများနှင့် COVID-19 ၏သက်ရောက်မှုများနှင့်လုပ်ငန်းခွင်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုရှိစေရန်အတတ်နိုင်ဆုံးလုပ်ဆောင်ခြင်းတို့ဖြင့်ကျွန်းသုံးကျွန်းလုံးကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ ယခုလအတွင်းလေနှင့်မြေလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုနှစ်ခုလုံးကိုလေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ရေမှုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများမဖြစ်နိုင်သလောက်ဖြစ် သို့သော်၎င်းသည် COVID-19 ဖြစ်သော်လည်း MRCU မှ ၀ န်ထမ်းများသည်မတ်လလယ် မှစ၍ ခြင်များကိုစစ်ဆေးရန်နှင့်ထိန်းချုပ်ရန်လယ်ပြင်၌အလုပ်လုပ်ကိုင်နေကြသည်။ လက်ရှိခြင်များပြားသည့်လူ ဦး ရေပုံမှန်ပြန်ရောက်သည်အထိသူတို့သည် ဆက်လက်၍ ဆက်လက်ကြိုးစားသွားမည်ဖြစ်သည်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွန်းများအားဆက်လက်ကရုဏာတော်ဖြင့်ကာကွယ်ရန်ဆုတောင်းပေးသည်။ ရပ်ရွာလူထုအားလူမှုရေးအရဝေးကွာသောနေရာများကိုဆက်လက်လေ့ကျင့်ခြင်း၊ သင်၏လက်များကိုဆေးကြောခြင်း၊ မျက်နှာဖုံးများကို ၀ တ်ဆင်ခြင်းနှင့်သင်နှင့်ဖျားနာလျှင်အိမ်တွင်သင်နှင့်သင့်ကလေးများကိုအိမ်တွင်ထားရှိရန်
Sidebar - ၀ န်ကြီး Hew က ၀ န်ကြီးဌာန Initiatives WiFi Hotspots နှင့်ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆုံးသတင်းများကိုတင်ပြသည်
ကျွန်တော့်ရဲ့ ၀ န်ကြီးဌာနမှနောက်ဆုံးသတင်းများကိုအများပြည်သူ ၀ န်ထမ်းများအားဝေမျှခွင့်ပေးသည့်အတွက်ဂုဏ်ထူးဆောင်ပရီးမီးယားလိဂ်နှင့်အခြားအဖွဲ့ ၀ င်များအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
COVID-19 ၏ရလဒ်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုအနည်းငယ်ကိုလျှော့ချခြင်းသို့မဟုတ်ရပ်တန့်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ DVDL အတွက်စာရေးခြင်းနှင့်ကားမောင်းခြင်းစမ်းသပ်ခြင်းများနှင့်အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးအဆောက်အအုံအတွင်းရှိရှေ့တန်းကောင်တာ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ အွန်လိုင်းသို့ကူးပြောင်းနိုင်ခြင်းမရှိသောလူကိုယ်တိုင် ၀ န်ဆောင်မှုများပါဝင်သည်။
အစိုးရအနေဖြင့်ကန့်သတ်ချက်များလျှော့ချခြင်းဖြင့်ရှေ့ဆက်သွားသည်နှင့်အမျှ ၀ န်ထမ်းများနှင့်ဖောက်သည်များအနေဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကိုပါလုံခြုံစိတ်ချရသော ၀ န်ဆောင်မှုအပြည့်အ ၀ ပြန်ပို့ရန်အစီအစဉ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်နေပြီဖြစ်ကြောင်းပြည်သူလူထုကိုစိတ်ချစေလိုသည်။
ကျွန်ုပ်၏ဌာနများနှင့်အေဂျင်စီများမှနောက်ဆုံးသတင်းများကိုမပေးပို့မီပုဂ္ဂလိက / အများပြည်သူကဏ္ partnership ပူးပေါင်းမှုမှရရှိသောကျွန်ုပ်တို့၏ကေမန်ကျွန်းစု ၃ ခုတွင်အစပျိုးမှုအသစ်တစ်ခုကိုကြေငြာချင်ပါသည်။
ဤအချိန်တွင်အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းသည်ယခင်ကထက် ပို၍ အရေးကြီးသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်လူအများကိုအွန်လိုင်းတွင်အသုံးပြုရန်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤအစီအစဉ်သည်ကျောင်းသားများ၊ မိသားစုများနှင့်လူငယ်စွန့် ဦး တီထွင်သူများကိုပင်အွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များကိုရယူရန်၊ သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်အဆက်အသွယ်ပြုရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ဤစီမံကိန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်မိတ်ဖက်များစွာသည်အချိန်၊ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ပစ္စည်းများကိုလှူဒါန်းခဲ့ကြသည်။ ငါကျေးဇူးတင်ရမည်
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနည်းပညာကုမ္ပဏီ Cisco သည် ဘို့ လှူဒါန်းခြင်း အများပြည်သူသုံး Wi-Fi လွှင့်စက်များအတွက်နည်းပညာအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ၊
IT အခြေခံအဆောက်အအုံအားလုံးကိုတပ်ဆင်ရန်ဒေသတွင်းအိုင်တီပံ့ပိုးသူ၊ Unified Technologies၊
လိုအပ်သော bandwith လက်လှမ်းမီမှုအတွက် Flow C & W၊
CPI ၀ န်ကြီးဌာန၊ နှင့်
အသိုင်းအဝိုင်း Wi-Fi ဟော့စပေါ့များသည်မှာ -
Cayman Brac ရှိအုပ်ချုပ်ရေးအဆောက်အအုံ
Little Cayman ရှိအစိုးရအိမ်၊ နှင့်
Grand Cayman မှာ
ဂျိမ်းအမ် Bodden Sr; လူထုစင်တာ
West Bay ပြည်သူ့စာကြည့်တိုက်
ဝီလျံ Allen က McLaughlin လူထုစင်တာ
Wi-Fi ဟော့စပေါ့များသည်တစ်ရက်လျှင် ၂၄ နာရီ၊ တစ်ပတ်လျှင်ခုနစ်ရက်ဖြစ်သည်။ UCCI တည်နေရာ မှလွဲ၍ ဖော်ပြထားသောဟော့စပေါ့အားလုံးသည်ယခုအချိန်တွင်အသက်ရှင်နေကြသည်။
အများပြည်သူ ၀ န်ထမ်းများသည်ဤတည်နေရာများသို့လည်ပတ်သောအခါသက်ဆိုင်ရာဘေးကင်းရေးနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာဝေးကွာသောလမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။
Cayman Islands Business Development စင်တာ
အခြားအစုစုနယ်ပယ်များသို့အစိုးရသည်ကျွန်ုပ်၏ ၀ န်ကြီးဌာနမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွန်းများတစ်လျှောက်ရှိအသေးစားနှင့်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးနေသည်။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကဂုဏ်ထူးဆောင်ပရီးမီးယားလိဂ်အပေါ်တစ် ဦး update ကိုပေး၏ စားသုံးသူ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အစိုးရ၏ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများအကြောင်း၊ ကေးမန်ကျွန်းစုစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစင်တာမှတစ်ဆင့်ကမ်းလှမ်းသည်။
မနေ့ကဇွန် ၂၂ ရက်အထိထည့်ချင်တယ်။
လျှောက်လွှာခုနစ်ရာလေးဆယ်ကိုး (၇၄၉) ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည် မိုက်ခရို နှင့် သေးငယ်သော စီးပွားရေးထောက်ပံ့ငွေအစီအစဉ်။ လက်ခံရရှိအားလုံး applications များ၏ 83% ယခုအချိန်အထိလုပ်ငန်းများ၌ပါပြီ။
ထောက်ပံ့ငွေလျှောက်လွှာများ၏စုစုပေါင်းတန်ဖိုး အတည်ပြု is $ 1,076,000.00 ။ ဒီငွေပမာဏ လျှောက်ထားသူများက $ 660,969.41 ကိုလက်ခံရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။
အတိုးနှုန်းနည်းသောချေးငွေအစီအစဉ်အတွက်အစိုးရအဖွဲ့မှခွင့်ပြုထားသောရန်ပုံငွေ၏ ၃၇% ကိုကိုယ်စားပြုသည့်လျှောက်လွှာ ၆၀ ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ လျှောက်လွှာသုံး (၃) ခုသည်မကြာသေးမီက Cayman Islands Development Bank မှအတည်ပြုခဲ့သည်။
လက်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုများအပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လုံခြုံစိတ်ချရသောပြည်တွင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုစတင်နိုင်ပြီဆိုပါကဘဏ္Centerာရေးနှင့်မဟာဗျူဟာဆိုင်ရာလမ်းညွှန်မှုအတွက်စီးပွားရေးအကြံပေးများနှင့်အတူအသေးစားနှင့်အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့်ငှားရမ်းခကိုအခမဲ့လည်ပတ်နိုင်သည့်လူနေအိမ်စီးပွားရေးတင်နုိုင်တာကိုစင်တာမှပေးလိမ့်မည်။
ကုန်သွယ်ရေးနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဦး စီးဌာန
အကြား မတ်လ 21 - ဇွန်လ 17, ကျော်လွန် 2,900 ကုန်သွယ်ရေးနှင့်လုပ်ငန်းလိုင်စင်များကိုဆောင်ရွက်ပြီးဖြစ်သည်။ ဒီထဲမှာကျော်ပါဝင်သည် 600 အသစ် ငါယုံကြည်သောကုန်သွယ်ရေးနှင့်စီးပွားရေးလိုင်စင်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဒေသစီးပွားရေးအပေါ်ယုံကြည်မှုရှိကြောင်းပြသပြီးစီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်စိတ်ဓာတ်သည်ရှင်သန်နေသည်ကိုပြသသည်။
မတ်လတွင်အစိုးရသည်ကုန်သွယ်မှုနှင့်စီးပွားရေးလိုင်စင်လျှောက်ထားခကို (အသစ်နှင့်သက်တမ်းတိုးခြင်းအတွက်) ၃၁ ဇူလိုင်အထိခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားကြောင်းပြည်သူလူထုကိုအသိပေးလိုပါသည်။
ကုန်သွယ်မှုနှင့်စီးပွားရေးလိုင်စင်ခများမှာ ၃၁ ဇူလိုင်အထိယာယီရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။
ကုန်သွယ်ရေးနှင့်စီးပွားရေးလိုင်စင်၊ အရက်လိုင်စင်၊ အထူးစီးပွားရေးဇုန်နှင့်ရုပ်ရှင်ကော်မရှင်တို့အားလုံးသည်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုရှိကြောင်းကိုလည်းဖော်ပြလိုပါသည်။
လွန်ခဲ့သောလများအတွင်းသင်၏ကြယ်တုန့်ပြန်မှုအတွက် DCI အဖွဲ့နှင့်ဘုတ်အဖွဲ့ ၀ င်များအားကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ပြီးခဲ့သည့်သုံးလတာကာလအတွင်း DVDL သို့လှည့်ကာ ၀ န်ထမ်းများသည်စုစုပေါင်းလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည် 10,181 မော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်သက်တမ်းတိုး။
ဒီအရေအတွက်၏, တစ်နေ့လျှင်မော်တော်ယာဉ် 7,873 သို့မဟုတ်တစ်နေ့လျှင်ယာဉ်များ 132 အကြောင်းကိုအသစ်ပြန်လည်ခဲ့သည်။ ဒါကအွန်လိုင်းစနစ်အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာသက်သေပြတာပဲ။ ပြည်သူလူထုကိုအွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းကိုဆက်သုံးဖို့အားပေးချင်တယ်။
သုံးစွဲသူများသည်ယခင်ကမြင်တွေ့ခဲ့ရသည့်နံပါတ်များသို့ရုံးများသို့ပြန်ရန်မလိုတော့သည့်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်၎င်းကိုပိုမိုထိရောက်စေရန်နှင့်အသုံးပြုရန်လွယ်ကူစေရန်အွန်လိုင်းစနစ်ကို DVDL မှပြုပြင်ပေးလိမ့်မည်။
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ၀ န်ထမ်းများနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောယာဉ် ၂,၂၈၈ စီးရှိသည်။
ကာလအတွင်းသက်တမ်းတိုးသည့်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်အရေအတွက်မှာဖြစ်သည် 1,686။ ငါအွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ထားသောအသုံးပြုသူပေါ်တယ်သုံးစွဲဖို့အများပြည်သူအားပေးလိမ့်မယ်
ယခု ဦး စီးဌာနသည်စာရေးခြင်းနှင့်ယာဉ်မောင်းစမ်းသပ်ခြင်းကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုအပြီးသတ်ရေးဆွဲနေပြီးအများပြည်သူအားလည်းအကြံပေးလိမ့်မည်။
စီမံကိန်း ဦး စီးဌာန
၎င်းသည်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ စီမံကိန်း ဦး စီးဌာနသည်ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ of ကိုအဆင့်ဆင့်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ရာတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ played မှပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများသည်စစ်ဆေးမှုများကိုဆိုင်းငံ့ထားသောစီမံကိန်းများအတွက်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများပေးခဲ့သည်။ ဤစီမံကိန်းများပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာချိန်တွင်သူတို့သည်မိသားစုပေါင်းစုံနှင့်စီးပွားဖြစ်စီမံကိန်းများသို့ကူးပြောင်းနေကြသည်။
ကာလအဘို့, မတ်လ ၁၅ ရက် - ဇွန်လ ၁၉ ရက်:
ထုတ်ပေးသည့်ပါမစ်အရေအတွက် - 108; ကျော်ကျော် $ 44million;
ထုတ်ပေးသည့်နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ် - 38ကျော်တန်ဖိုးထား 59 သန်း.
အတည်ပြုထားသောစီမံကိန်းအရေအတွက် - 38ကျော်တန်ဖိုးထား 10 သန်း
စစ်ဆေးပြီးစီးသည့်အရေအတွက် - 663.
၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအနေဖြင့်လေဆိပ်၊ Savannah နှင့် West Bay ရှိစာတိုက်သုံးခုတွင်စီမံကိန်းအခကြေးငွေပေးဆောင်နိုင်ရန်အတွက်စီမံကိန်းဌာနသည်စာတိုက်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ယခုလက်ရှိပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့်ဝမ်းမြောက်မိပါသည်။ ဤတည်နေရာများသည်ဌာန၏ကိုယ်စားငွေသားထုတ်ယူခြင်းနှင့်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများကိုစစ်ဆေးနိုင်သည်။ ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းတိုးတက်စေရန်အတွက်အစိုးရ ၀ န်ဆောင်မှုများကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့်ဤလက်တွဲမှုအတွက်စာတိုက်ဝန်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်ကျေးဇူးတင်လိုပါသည် ရွေးချယ်မှုများ အများပြည်သူသို့။
အခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် ပတ်သက်၍ NRA သည်လမ်းများပေါ်ရှိယာဉ်အရေအတွက်လျှော့ချခြင်းမှအကျိုးကျေးဇူးရရှိစေရန်ယခုလတွင်အရေးပါသောလမ်းများဖောက်လုပ်မှုကိုစတင်ခဲ့သည်။
NRA အဖွဲ့သားများသည် Shedden လမ်း၊ Harbour Drive နှင့် Crewe လမ်းတို့တွင်ပြန်လည်မျက်နှာပြင်ချခြင်းပြီးပြီဖြစ်သည်။
George Town တွင် - North Sound လမ်း (Alissa Towers မှ)၊ နှင့် Elgin ရိပ်သာလမ်း (ရဲစခန်းအားဖြင့်),
Bodden မြို့areaရိယာ - Manse Road, Pease Bay နှင့် Breaker ၏အစိတ်အပိုင်းများ၊ West Bay လမ်း၊ နှင့် Blowholes အားဖြင့်အရှေ့အဆုံး၏ကဏ္sectionsများ။
ဇူလိုင်လအကုန်တွင်ပြီးစီးမည်ဖြစ်သော Chrissie Tomlinson အဝိုင်းနှင့် Rex Crighton Boulevard တိုးချဲ့ရန်လည်းလုပ်ဆောင်နေသည်။
ထို့အပြင်လာမည့်ရက်သတ္တပတ်များအတွင်း၌လေဆိပ်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းပေါ်တွင်စတင်လုပ်ကိုင်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ ၎င်းသည် Esterley Tibbetts အဝေးပြေးလမ်းမကြီးနှင့် Sparky Drive သို့စက်မှုဇုန်ဥယျာဉ်မှတစ်ဆင့်မိုးသည်းထန်စွာစီးဆင်းမှုကိုသက်သာစေရန်နှင့် Butterfield အဝိုင်းတွင်ပိတ်ဆို့မှုကိုလျှော့ချရန်ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ZRA မှတဆင့် NRA ဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးအသုံးပြုသူများအားလုံးအတွက်လမ်းများကိုပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချစေရန်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်သဘောတူညီခဲ့ပြီး၊
သို့သော် အကယ်၍ အာကာသကကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်မပြုပါကလမ်းများကိုမော်တော်ဆိုင်ကယ်များ၊ စက်ဘီးစီးသူများနှင့်လမ်းလျှောက်သူများအားမျှဝေရန်အသုံးပြုသူများကိုခွဲခြားသိရန်နှင့်အမှတ်အသားပြုရန်ဆိုင်းဘုတ်များနှင့်လမ်းအမှတ်အသားများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မျှဝေထားသောလမ်းများနည်းစနစ်ကိုလိုက်နာပါမည်။
လူတိုင်းကိုသတိထားရန်နှင့်လမ်းများသုံးနေစဉ်ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်ကိုယူရန်ကျွန်ုပ်အားတိုက်တွန်းလိုပါသည်။ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကပဲကျွန်တော်တို့ခရီးသွားရက်တွေ၊ အချိန်တွေမှာကန့်သတ်ချုပ်ချယ်ခံခဲ့ရတယ်၊ စိတ်ရှည်သည်းခံမှုအတိုင်းအတာကို ဆက်၍ ပြသရန်၊ လမ်းများပေါ်တွင်အချိန်ကိုလျှော့ချရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်များကိုစီစဉ်ရန်နှင့်လမ်းလျှောက်ရန်၊ ပြေးရန်သို့မဟုတ်စက်ဘီးစီးရန်သွားရန်သို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်အတွက်စက်ဘီးစီးနေသောကျွန်ုပ်တို့နှင့်လမ်းများကိုဆက်လက်မျှဝေရန်ကြပါစို့။
ငါဒေသများအားလုံးအပေါ်ထိမိကြပြီမဟုတ်ပေမယ့်ချင်တယ် မီးမောင်းထိုးပြ အထူးသဖြင့်ဤကာလတစ်လျှောက်လုံးလုပ်ငန်း E-Government Services Unit ၏အရေးကြီးပုံ။ ၎င်းတို့သည်အစိုးရနှင့်အေဂျင်စီများနှင့်ဌာနများအကြားအထောက်အပံ့များပေးခဲ့သည်။
အမိုးအကာနေရာတွင် EGov အဖွဲ့သည်နည်းပညာဆိုင်ရာအဖြေများအားအစိုးရအနှံ့အပြားအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။
gov.ky/coronavirus ဆိုက်အတွက် Chatbot လက်ထောက်၊ နှင့်
E-Gov အဖွဲ့သည်လက်ရှိတွင်ကွန်ပျူတာ ၀ န်ဆောင်မှုဌာနနှင့်ပူးပေါင်းပြီး e-commerce ဖြေရှင်းနည်းများကိုဇူလိုင်လတွင်စတင်ရန်ရောင်းချသူများဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားပါဝင်သည်:
DVDL အတွက်အပိုအွန်လိုင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ - မှတ်ပုံတင်အသစ်များနှင့်ယာဉ်လွှဲပြောင်းခြင်းများ၊ နှင့်
ဤ COVID-19 ကူးစက်မှုသည်ဒစ်ဂျစ်တယ် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေး၏အရေးကြီးမှုကိုရှေ့တန်းတင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိအွန်လိုင်း ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ယနေ့အထိကြိုးပမ်းမှုများမှကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်သိသိသာသာအကျိုးခံစားခဲ့ရသော်လည်း၊ အထူးသဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်နယ်ပယ်တွင်အဓိကအခွင့်အလမ်းများ / ကွာဟချက်များကိုပိုမိုသိရှိလာခဲ့သည်။ အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်စနစ်မရှိခြင်း။
သတင်းကောင်းမှာ E-Gov အဖွဲ့သည်ဤစနစ်နှင့်အခြားစီမံကိန်းအချို့တွင်အလုပ်လုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ လူ ဦး ရေမှတ်ပုံတင်နှင့်အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်စနစ်အားအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စီးပွားရေးတွင်ကေမန်ကျွန်းများကိုသိသိသာသာရှေ့သို့တိုးတက်စေမည့်အဖွဲ့သည်တိုးတက်မှုရရှိခဲ့သည်။
အဖွဲ့သည် ID စနစ်နှင့် ပတ်သတ်၍ ပြည့်စုံသော ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ကိရိယာများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်အထောက်အပံ့များကို ၀ ယ်ယူရန်ကြိုးစားနေသည်။ ၎င်းသည် ၂၀၂၁ ၏ဒုတိယသုံးလပတ်တွင် National IDs ထုတ်ပေးခြင်းကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ခဲ့သည်။
၎င်းကိုရရှိရန်အတွက်အဓိကမှီခိုမှုများသည်လူ ဦး ရေစာရင်းကိုပြီးစီးခြင်းဖြစ်သည်။ ဥပဒေပြုခြင်းနှင့်ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုထောက်ပံ့ခြင်း။
လူ ဦး ရေမှတ်ပုံတင်သည်ယခုနှစ်စတုတ္ထသုံးလပတ်တွင်စတင်အကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်အဆင်သင့်ဖြစ်သည့်နည်းပညာဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်အများစုဖြင့်စတင်ရန်လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်ရှိနေသည်။
ငါမပိတ်မီ, E-Government နှင့်ကွန်ပျူတာ ၀ န်ဆောင်မှုဌာနဌာနများအားအစိုးရ၏အသွင်ကူးပြောင်းမှု ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအစိုးရအားထောက်ပံ့ရာတွင်နောက်ကွယ်မှလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ဒါ့အပြင် ၀ န်ကြီးဌာန ၀ န်ထမ်းအားလုံးဟာဒီကျွန်းများကို ၀ င်ရောက်အမှုဆောင်ခြင်းအတွက်များစွာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့လည်ပတ်နေသည့်အခြေအနေများကြားမှ၎င်းတို့သည် ၁၀၀% ဆက်ပေးသည်။